पाज कास्टेला। हामी कसैको पनि लेखकको अन्तर्वार्ता अनुकम्पा हुँदैन वर्तमान साहित्य
पाज कास्टेला। हामी कसैको पनि लेखकको अन्तर्वार्ता अनुकम्पा हुँदैन
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | साक्षात्कार, लेखकहरू, नोभेला, धेरै
फोटोग्राफी: Paz Castelló वेबसाइट।
पाज कास्टेला, संचार को दुनिया मा एक लामो क्यारियर संग एलिसान्टे का एक लेखक, शीर्षक नयाँ उपन्यास प्रस्तुत गर्दछ हामी कसैलाई पनि करुणा हुँदैन। उसले २०१ 2013 मा प्रकाशन गर्न सुरु गर्यो Of को मृत्यु। अन्य शीर्षक भएको छ शौचालय ढोकामा मेरो नाम लेखिएको, अठार महिना र एक दिन y कुञ्जी १०104। le मुरी मुरी धन्यवाद तपाईंले यसका लागि मलाई समर्पण गरेको समय साक्षात्कार जहाँ उनले हामीलाई त्यो नयाँ उपन्यास र अधिकको बारेमा बताउँछन्।
पाज कास्टेला - साक्षात्कार
साहित्य वर्तमान: तपाईको भर्खरको उपन्यास हो हामी दुवैले दया देखाउँदैनौं। तपाईं हामीलाई यसमा के भन्नुहुन्छ?
PAZ CASTELLOO: En हामी कसैलाई पनि करुणा हुँदैन (संस्करण बी) कहानी कमिला र नोराको कथा, जुन सुरुमा देखा पर्न सक्छ दुई धेरै धेरै फरक महिला उमेर र गाह्रो परिस्थितिबाट, तर चाँडै पत्ता लाग्यो कि उनीहरूसँग केहि साझा छ: दुईमा उनीहरूलाई विगतका मानिसहरूले प्रयोग गरेका थिए र अब उनीहरू उनीहरूलाई भेट्न डराउँदैनन्, निर्णयले उनीहरूको जीवनलाई असर गर्छ। कमिला एक परिपक्व महिला हुन् जसले आफ्नो पतिबाट अलग गर्ने निर्णय गरी। यसले उनलाई उनको लागि शicious्कास्पद रूपमा लाभदायक सम्बन्ध विच्छेद सम्झौतामा पुग्दछ।
आफ्नो पूर्व साथीको लुकेको मनसाय अनुसन्धान गर्दा, उनी नोरालाई भेट्छिन्, जुन उनीभन्दा २० वर्ष कान्छी छोरी थिइन्, जसले वर्षौंदेखि डरलाग्दो गोप्य कुरा गरिरहेकी छ र जो एलिसेन्टेमा बदला लिन आउँदछन्। केमिला र नोरा बीच एक धेरै विशेष सम्बन्ध छायाको छायाको साथ उत्पन्न हुन्छ रोमाञ्चक, तर सतह मा एक कामुकता संग। एक हो बहिनीपन र महिला सशक्तिकरणको कथा, रहस्यको भारी र धेरै शक्तिशाली षडयन्त्रको साथ।
AL: के तपाईं पहिलो पटक पढ्नु भएको पुस्तकको मेमोरीमा जान सक्नुहुन्छ?
पीसी: मलाई लाग्छ कि मलाई त्यो एक शीर्षक याद छ सुनका कथाहरू। म तपाईलाई लेखक बताउन सकिन। यो एक थियो कथा संग्रह केही नैतिक तर धेरै समय। मेरो बुबाले मेरो लागि फ्लाई मार्केटमा किन्नुभयो। उनलाई पुरातन चीजहरूको धेरै रुचि थियो। यो सत्तरीको दशकको शुरुमा थियो र त्यसबेलासम्म यो पुरानो पुस्तक थियो। मलाई याद छ उसले मलाई पनि किनेको थियो Moby Dick, तर मैले यो पछि पढें।
AL: र पहिलो कथा तपाईंले लेख्नुभयो?
पीसी: मैले लेखेको पहिलो कुरा थियो कविताहरु। सानै उमेरदेखि नै मैले पढ्न थालें ग्लोरिया Fuertes र मलाई यो मन पर्यो। मलाई लाग्छ, केहि तरिकाले मैले उनको नक्कल गर्न खोजेको थिएँ।
पीसी: जब म बाह्र वर्षको थिएँ म पढें पूर्वी बतास, पश्चिम बतास, को पर्ल एस। बीक। यसले मलाई धेरै चिह्नित गर्‍यो किनभने एक पुस्तकमार्फत र यति शुरुको उमेरमा मैले अर्को संस्कृति पत्ता लगायो, संसारलाई सोच्ने र बुझ्ने अर्को तरिका। परम्परागत चिनियाँ संस्कृति बनाम पश्चिमी मानसिकता जुन उपन्यासले चित्रण गरेको छ त्यो मेरो लागि ज्यादै चिन्ताजनक थियो। विशेष गरी विभिन्न समाजमा महिलाको भूमिका।
AL: त्यो मनपर्ने लेखक? तपाईं एक भन्दा बढि र सबै पटकको हुन सक्नुहुन्छ।
पीसी: म संग रहन जाँदैछु अगाथा क्रिस्टी, विधाले लेख्नुभएको हो र एक हुनको लागि अग्रगामी र धेरै प्रतिष्ठित महिला। अवश्य पनि असंख्य लेखकहरू छन् जसले मलाई मोहित पार्छन्, तर ती सबैलाई उल्लेख गर्दा धेरै अरूलाई अन्याय हुनेछ, म रहस्यको महान महिलाको साथ छु।
पीसी: यो छनौट गर्न धेरै गाह्रो छ, तर यो दिमागमा आउँदछ उदाहरणका लागि, सानो राजकुमार. एक बच्चाको रूपमा मलाई यो वास्तविक हुन मन परेको थियो। यो काल्पनिक साथी जस्तो केहि थियो। पनि एलिसिया लुइस क्यारोल द्वारा। तर सूची हुनेछ अन्तहीन.
पीसी: केवल दुई: मौन र आरामदायक लुगा। त्यहाँबाट यात्रा सुरु हुन्छ।
पीसी: मैले लेख्नु पर्छ घरमा। मलाई थाहा छैन अन्य ठाउँमा कसरी ध्यान केन्द्रित गर्ने। त्यहाँ जो पुस्तकालय वा कफि पसलमा लेख्छन्। मलाई एकान्तता र शान्ति चाहिन्छ। मेरो लागि यो एक प्रकारको ट्रान्स स्टेट हो जसको लागि मलाई पूर्ण एकाग्रता चाहिन्छ।
पीसी: मेरो मनपर्ने छ रोमाञ्चक तर म सबै पढ्छु। म के सोध्छु कि यो राम्रो कथा हो र यो राम्रोसँग भनिएको छ। म पनि एक पाठक हुँ कविता र को थिएटर.
पीसी: त्रिएकको अन्तिम ब्लास रुइज ग्रू, तिमी मर्ने छैनौ. म हुँ अन्त्य उपन्यास। अन्य घरेलु नाई धेरै चर्चित सामाजिक मुद्दाको साथ। अहिले सम्म म गणना गर्न सक्दछु।
AL: तपाइँ कसरी सोच्नुहुन्छ कि प्रकाशन दृश्य कस्तो छ? धेरै धेरै पुस्तकहरू, धेरै लेखकहरू?
पीसी: यो एक हो धेरै गाह्रो र गाह्रो संसार। धेरै प्रतिस्पर्धी र अल्पकालिक जहाँ मार्केटिंगको नियमहरू कहिलेकाँही साहित्यिकहरू भन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छन्। म टाढा जान प्रयास गर्छु त्यो उर्जा जुन कहिलेकाँही यस क्षेत्रको वरिपरि छ र राम्रो साहित्य बनाउन ध्यान दिनुहोस्। म लेखक हुँ, त्यो मेरो काम हो। अरू सबै कुरा मेरो नियन्त्रण बाहिर छ।
मलाई लाग्छ कि त्यहाँ सधैं लेख्ने मानिसहरु छन् कि केवल इन्टरनेटले अधिक देखिने बनाएको छ। अन्त मा यो सधैं हुन्छ आपूर्ति र मागको बिच केही सन्तुलन, कुनै पनि अन्य क्षेत्र मा जस्तै। यसको मतलब यो होइन कि यो निष्पक्ष छ र त्यो संक्षिप्त क्षति हुँदैन।
पीसी: व्यक्तिगत रूपमा, यो स en्कट समृद्ध हुँदैछ। भाग्यवस, स्वास्थ्यले हामीलाई सम्मान गरेको छ। म सँधै कठिन परिस्थितिबाट सकारात्मक निकाल्ने प्रयास गर्छु। दिनको अन्त्यमा, यो हामीले चीजहरू वरिपरि फेर्नु पर्ने तरिका हो। तर, मलाई लाग्दैन कि मैले यसलाई लेख्ने किताबहरूमा प्रयोग गर्छु। म यस धारणाको छु हामीले आन्तरिकरण गर्न र सृजनात्मक रूपमा मद्दत गर्न सिकेको कुराको पृष्ठभूमिमा यसले समय र दूरी लिन्छ। म यसलाई व्यक्तिगत स्तरमा बढी प्रयोग गर्दछु। जीवनले प्रदान गर्ने सबै राम्रो चीजको लागि म हरेक दिन धन्यवाद दिन्छु। म साना कुरालाई बढी महत्त्व दिन्छु।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » पाज कास्टेला। हामी कसैको पनि लेखकको अन्तर्वार्ता अनुकम्पा हुँदैन